ဘ၀ခရီးတစ်ခု၏ ခံစားမှုပုံရိပ် မှတ်တမ်းလေးများ (လင်းလက်ကြယ်စင်): ကျေးဇူးတင်လွှာ
ကျွန်မ စာတွေပဲစွတ်ရေးနေခဲ့တာ ကျေးဇူးတင်ထိုက်သူတွေကို စာတစ်လုံးမှ မရေးရသေးဘူး.. ပထမဦးဆုံး ကျေးဇူးတင်ချင်တာက ကျွန်မကို ဒီလောကထဲမှာ အမှန်တရားကိုချစ်မြတ်နိုးပြီး သူများလက်အောက်မှာ အညံ့မခံတတ်တဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်အောင် စည်းကမ်းတွေမြောက်များစွာနဲ့ တင်းတင်းကျပ်ကျပ် လေ့ကျင့်ပေးခဲ့တဲ့ ဖေဖေနဲ့မေမေကို ကျေးဇူးဂါဝရတင်ပါရစေ.. ဒုတိယ ကျေးဇူးတင်ချင်တာက ကျွန်မနာမည်ကို ဘယ်သူမှသတိမထားမိခင်ကတည်းက ပထမဦးဆုံးအားပေးခဲ့ကြတဲ့ ပင်လုံဂျီတီစီမှ ကိုကြီးဟန် ၊ မမနတ်သမီးငယ် ၊ ကိုအောင်သူမိုး ၊ ကိုမင်းလွင်တို့ပါ.. တောင်ကိုရီးယားမှ ကိုနေမင်း ( ksm ) ။ ဟန်နီချို ၊ ကိုချစ်ဦးကို ၊ Zero Boyz ၊ ဆုလှိုင် ၊ မမပစ်ဂီ ၊ သြဇီမှ အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းဆွိတို့အားလုံးကိုလည်း ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်.. ကျွန်မစာတွေကို ဖတ်ပြီး အမြဲတမ်းဝေဖန်မှတ်ချက်မေးလ်ပို့ပေးလေ့ရှိတဲ့ မေးလ်နဲ့ခင်သော သူငယ်ချင်းများအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်.. မြန်မာချတ်နှင့် ပလန်းနက် တီးရှော့မှ အားပေးကြသော မောင်နှမမိတ်ဆွေအားလုံးကိုလည်း ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်.. ဘလော့ခ်ကိုပုံမှန်ဝင်ဖတ်သေးသော သူများအားလုံးနှင့် ကိုချို ၊ ကိုသက်နိုင် ၊ 7monkeys group ၊ ကိုချမ်းမြစိုးတို့အားလုံးအပါအ၀င် မြန်မာဘလော့ခ်ဂါများအားလုံး ၊ လမ်းကြုံဝင်ဖတ်ပေးကြသော ၊ ကျွန်မကို လမ်းမမှားအောင် အမြဲတမ်းထိန်းသိမ်းဆုံးမသော မွေးစားမောင်နှမများအားလုံးကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်.. သတင်းဌာနမှ ကျွန်မနှင့်သိသော မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်.. ရေးခဲ့သောစာများ ဖော်ပြပေးခြင်းပြုခဲ့သော ချယ်ရီသစ္စာနှင့် သံလွင်အိပ်မက် ၊ မြန်မာပြည်သားတို့မှ အယ်ဒီတာများကိုလည်း ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်…. စင်ကာပူနိုင်ငံရှိ ပေါ်လီကျောင်းမှ အားပေးသော မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုလည်း ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်…. မဆက်သွယ်ပေမယ့် ရေးခဲ့သမျှစာအားလုံးကို ဖတ်ပေးသောသူများအားလုံးကိုလည်း ဒီစာမျက်နှာပေါ်ကနေ ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိကြောင်း………